Obolewwan keenya kun Lameen Kadir fi Awwal jedhamu Bala Hajji Minaa gubbat dhaqabe irrat Haadha isaan lubbuun baasan isaan lameen gamma akhirat deemaniru. -
Obolewwan keenya kun Lameen Kadir fi Awwal jedhamu Bala Hajji Minaa gubbat dhaqabe irrat Haadha isaan lubbuun baasan isaan lameen gamma akhirat deemaniru.
bilisummaa October 15, 2015	Leave a comment
Obolewwan keenya kuniin Jiraatota Biyya Saud Arabiyaa Magaala Riyaadit.
Lameenu kan fuudhanif Abba ijoole Tokko tokkoot.
Hadha isaan Hajiif Naanoo Oromiyaa Godina Wolaga Magaala Horo Gudurru irra fidan haaji wajjiin osso gegeeysan balaan kun yeroo argamet Lubbu haadha isaan bararan isaan gamma akhirat imalaniiru.
Sirna Haaji kana gubbat Maatin Nama 9tu wajjiin ture Haadha isaani fi Obooleyti haadha isaan isaan lameen akkasummas Ilmaa obooleyti isaani fi haadha mana isaan woluma galati Maati 9 keeysa namoon 4 gamma fuula Rabbit deemaniru.
Rabbiin isaanif Haa araramu !
Sagantaa Raadiyoo Daandii Haqaa guyyaa hardhaa keeysati Maati kana dubifneera Obooleysi keenya Tokkos muuddano Haaji gubbat Minat issa muudatef Lubbuun issa akkamiin du’a irraa akka olte nuf seenesa .
Sagantaa keenya guyyaa hardhaa gubbat nu Eega !!!
Previous Itiyoophiyaatti Nama Miliyoona 8.2 Gargaarsa Barbaada
Next Rakkoon ummata Oromo Maali?